Ny Samsung Gear 360 Pro dia afaka miaraka amin'ny Samsung Galaxy S8 | Vaovao momba ny gadget
Ny tsaho momba ny famoahana ny Samsung Galaxy S8 farany teo dia nihahery sy nihanatanjaka ary tsy nihena kely intsony nanomboka teo Samsung dia tsy manana fahombiazana araka ny antenaina amin'ny Samsung Galaxy Note 7.
Toy izao ny mpiara-dia amin'i Villamandos andro vitsivitsy lasa izay. Ary ankehitriny SamMobile dia tsy vitan'ny hoe mandray fotsiny ny vaovao fa mitatitra ihany koa ny fahatongavan'i Samsung Gear 360 Pro, kinova vaovao amin'ny fakantsary fampiasa mampitombo azy izay toa avy amin'ny tanan'ny Samsung Galaxy S8.
Ny kinova vaovao an'ny Gear 360, ny Samsung Gear 360 Pro dia ho maodely mandroso izay tsy ny fizotry ny fisamborana ihany no hatsaraina fa koa nohatsaraina ny famahana ny sary sy ny fakan-tsary fakan-tsary, na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy hainay ny antsipirian'ny teknika ary koa ny vidin'ity gadget ity.
Ny Samsung Gear 360 Pro dia ho avy miaraka amin'ny fanatsarana ara-teknika mba hisamborana tsara kokoa
Araka izany, toa handika ny fampisehoana ny Samsung Galaxy Note 7 i Samsung izay ankoatry ny finday dia nanolotra maodely iray an'ny Samsung Gear VR, ny Samsung 360 sy ireo kojakoja hafa izay filokana Samsung. Raha marina izany dia mety tsy manana kinova Pro an'ny Samsung 360 fotsiny isika andao hanana maodely vaovao amin'ny vera Virtual Reality ianao ary koa kojakoja hafa hafa izay hiaraka amin'ny Samsung Galaxy S8 vaovao, toy ny fonony fitendry ho an'ireo matihanina indrindra na S Pen namboarina tamin'ny phablet.
Izaho manokana dia mino fa ny vaovao toy izany avy amin'ny SamMobile dia marina ary ny fipoahana ny Samsung Galaxy Note 7 dia manimba betsaka ny orinasa. Saingy ny Samsung mandroso ny fandefasana ireo vokatra ireo dia famantarana ratsy satria manondro ny maodely phablet, Fanamarihana 7 diso ny famolavolana ary noho izany dia mipoaka, no manamarina ny fandefasana finday hafa fa tsy ny fanamboarana ny maodely. Na izany na tsy izany dia toa eo an-dàlana ny finday sy gadget vaovao, fa Hipoaka ve ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » Accessories » Ny Samsung Gear 360 Pro dia afaka miaraka amin'ny Samsung Galaxy S8 vaovao
iFixit dia manamafy fa ny batterin'ny Apple Watch vaovao dia manana fahaiza-manao lehibe kokoa